» सिन्धुपाल्चोकमा पोखरीमा हाम फालेर १६ बाँदर मरे, आत्महत्या कि हत्या ?
सिन्धुपाल्चोकमा पोखरीमा हाम फालेर १६ बाँदर मरे, आत्महत्या कि हत्या ?
२३ श्रावण २०७६, बिहीबार ०६:१३
मंगलबारदेखि नै सोसल मिडियामा एउटा खबर र त्यससँगै फोटो पनि भाइरल भयो। लेखिएको थियो– सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोक गढि न. पा. वडा १३ अर्चले गाउँको महादेबथान छेउको खेतमा रहेको पोखरीमा बिहान बाँदरहरुले सामूहिक आत्महत्या गरे। कतिपयले यसलाई हावा खबर भन्ठानेर उडाए पनि। तर बुधबार भने कान्तिपुर अनलाइनमै समाचार आयो। शीर्षक थियो– पोखरीमा हाम फालेर १६ बाँदर मरे । भाइरल खबर र कान्तिपुरमा आएको खबरमा खासै फरक थिएन। फेसबुकमा भाइरल खबरमा भनिएको थियो
कान्तिपुरको खबरमा पनि यी दुईलाई उद्‍धृत गरिएको छ ।
‘म धान खेतमा पानी थुन्न गएको थिएँ,’ उनले भने, ‘सधैंभन्दा अलि फरक तरिकाले बाँदरहरू चिच्याएको सुनेर पोखरीमा हेर्न पुगेँ।’ आफूले देख्दादेख्दै पनि डुबेकालाई बचाउने शैलीमा बाँदरहरू लगालग पानीमा हाम फाल्न थालेपछि होहल्ला गरेर गाउँले बोलाएको उनले बताए। क्षेत्रबहादुरको आवाज सुनेर आएका छिमेकी कुश्माखर दुलाल पनि सुरुमा त छक्क परे। त्यसपछि जम्मा भएका गाउलेले पोखरीमा हाम फाल्न ठिक्क परेका बाँदरको हुल धपाए। डुबेर छटपटाइरहेकालाई बाहिर निकाले। यो के अनर्थ हुन लागेको भनेर सुरुमा त हामी अचम्ममा पर्‍यौं,’ स्थानीय कुलप्रसाद दाहालले भने, ‘९ वटालाई बचाउन सकियो। १६ वटा मरेछन्। अरुलाई धपाउन पनि गाह्रै भयो।’ घटनाले गाउँलेलाई अचम्मित पार्नुका साथै दुस्खी बनाएको उनले बताए। ‘गाउँले मिलेर बाँसले बाँदर निकालेका हौं,’ उनले भने, ‘पोखरी बर्खाले आधाआधी भरिएको छ।’ गाउँलेले तत्कालै प्रहरीलाई घटनाको जानकारी गराएको उनले बताए।